Minecraft Pocket Edition အတွက်အကောင်းဆုံး mods ၁၀ ခု Androidsis ပါ
စျေးကွက်တွင် ၁၀ နှစ်ကျော်ရှိနေသော်လည်း Minecraft သည်ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည် ကလေးများနှင့်လူကြီးများအကြားရေပန်းအစားဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်မရ။ ဒါဟာခေတ်မမီတော့တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးခေတ်အဆက်ဆက်အတွက်ငါတို့ပြောနိုင်တယ်။ Microsoft သည် Mojang (ဂိမ်းဖန်တီးသူ) ကို ၀ ယ်ယူခဲ့စဉ်ကတည်းက၎င်းသည်ပိုမိုကြီးထွားအောင်မကြီးထွားခဲ့ပါ။
mods များကြောင့်ကစားသမားများသည်သူတို့၏ gaming အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ PC ဗားရှင်းသည်စွယ်စုံဆုံးဖြစ်သော်လည်း Android ဗားရှင်းသည်မဝေးတော့ပါ၊ mods များစွာကိုလည်းထည့်နိုင်သည်။ ဘာတွေလဲဆိုတာသိချင်ရင် Minecraft Pocket အတွက်အကောင်းဆုံး mods များ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1 ဆက်စပ်ဆောင်းပါး - Minecraft အရေခွံများကိုအခမဲ့ download လုပ်ပြီး install လုပ်နည်း
2 Minecraft Pocket Edition တွင် mods မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
2.1 Minecraft Pocket Edition တွင် mods ကို install လုပ်ရန်နည်းလမ်းများ
2.1.1 Minecraft အတွက်အပိုပစ္စည်းများ
3 Minecraft Pocket Edition အတွက်အကောင်းဆုံး mods များ
3.3 X-Ray အမြင်
3.4 Lucky Block ပါ
3.6 Minecraft PE အတွက် Mods များ
3.7 Mods - Minecraft PE အတွက် AddOns
3.8 Minecraft PE အတွက် Block Master
3.9 Minecraft အတွက် Addons
3.10 Minecraft PE အတွက်ပရိဘောဂ mods များ
4 Minecraft ပုံစံအတုများကိုသတိပြုပါ
Minecraft Pocket Edition တွင် mods မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
PC version တွင်ကဲ့သို့၎င်းကိုသတိပြုပါ mods များနှင့် add-ons အားလုံးသည်ဂိမ်းဗားရှင်းအားလုံးတွင်အလုပ်မလုပ်ပါအထူးသဖြင့် Play Store အပြင်မှာငါတို့တွေ့နိုင်တဲ့ mods တွေ၊ အရင်းအမြစ်ပေါ်မူတည်ပြီးစက်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ mods တွေ။
ဤအရာသည် GitHub တွင်ရှိနေလျှင် မင်းမှာပြသနာမရှိဘူးမရ။ သို့သော်၎င်းသည်ကျပန်းဝဘ်စာမျက်နှာဖြစ်လျှင်၎င်းသည်လှည့်စားနိုင်သောအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အတွက်အကောင်းဆုံးစာမျက်နှာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Minecraft အတွက် mods သည် Mcpdel ဖြစ်သည်mods နှင့် texture pack များ၊ လှည့်ကွက်များ၊ အရေခွံနှစ်ခုလုံးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဗားရှင်းလိုအပ်ချက်အပြင်၊ Play Store တွင်ရနိုင်သော mods များသည် Play Store တွင်ရနိုင်သော Minecraft version နှင့်လိုက်ဖက်သည်မရ။ ငါတို့လုပ်ရမှာကပထမ ဦး ဆုံးအရာကကောင်းမွန်တဲ့ပုံနှိပ်စာကိုဖတ်ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်လေမှာငါတို့ကစမ်းသပ်မှုပုံစံကိုအသက်သွင်းရမယ်၊ ကိုယ်ပိုင်ချက်ပြုတ်နည်းတွေရှိရမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် mod တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်အောင်သီးခြားနေရာတွေကိုသွားဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးတယ်။
ငါတို့အရင်ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကြီးနဲ့ပြသနာမဖြစ်အောင်ရှောင်တာအကောင်းဆုံးဘဲ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုဖန်တီးပါmod များသည် mod အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ဂိမ်းအားအပြောင်းအလဲများစွာပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ကမ္ဘာသစ်မဖန်တီးခင် Add-ons option ကိုသွားပြီးငါတို့ install လုပ်ထားတဲ့ mod နဲ့ resource ကိုရွေးရမယ်။
Minecraft Pocket Edition တွင် mods ကို install လုပ်ရန်နည်းလမ်းများ
mods များကို Play Store တွင်ရနိုင်သည် အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ထားသည် ငါတို့နောက်ထပ်အဆင့်တွေထပ်ယူစရာမလိုဘဲ အကယ်၍ ၎င်းသည်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကျော်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ ငါတို့သည်အင်တာနက်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော mods များနှင့်ပတ်သက်လျှင်၎င်းကိုအောက်တွင်သင်၏ကွန်ပျူတာတွင်ထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်း ၃ ခုကိုပြလိမ့်မည်။
ဒီလျှောက်လွှာကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် mods ကိုတစ်ချက်ကလစ်ဖြင့် install လုပ်ပါ လူများစွာသည်ဤအပလီကေးရှင်းနှင့်သဟဇာတမဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အမြန်ဆုံးနှင့်အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Minecraft အတွက် Addons
ရေးသားသူ: Kayen အလုပ်လုပ်သည်
ဤလျှောက်လွှာ ၎င်းသည်ယခင်ကအသုံးအများဆုံးဖြစ်သည် mod များကို install လုပ်ရန်အပလီကေးရှင်းသည်အသုံးပြုသူများစွာအတွက်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ
ရေးသားသူ: Zhuowei Zhang က
အဆုံး၌ mods များတပ်ဆင်ခြင်း၏လက်စွဲနည်းလမ်းသည်မအောင်မြင်ဘဲကျွန်ုပ်တို့အမြဲလိုလိုအားကိုးအားထားပြုနေရသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်အတွင်း mods များကိုအမြန်ရှာပါ။
ငါတို့မှာ .mcpack ဒါမှမဟုတ် .mcworld extension ရှိသင့်တဲ့ mod ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲဒါကိုကလစ်ပြီးရွေးစရာကိုရွေးပါ။ ၎င်းကို Minecraft Pocket Edition သို့တင်သွင်းပါ။
Minecraft Pocket Edition အတွက်အကောင်းဆုံး mods များ
El Fornite လက်နက်များ၊ ပစ္စည်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များစွာပါဝင်သည် Epic Games, Fortnite ၏နာမည်ကြီး battle royale ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်မရ။ မင်းက Minecraft နဲ့ Fortnite ကိုကြိုက်ရင်ဒီ mods ဒါမှမဟုတ် Minecraft Pocket Edition မှာမင်း mods တွေပျောက်သွားနိုင်တယ်။
သင် Minecraft Pocket Edition ကို Java ဗားရှင်း၊ mod နှင့်ဆင်တူချင်လျှင် ကျောက်ခဲအိပ်ယာ ငါတို့သွားမယ့် mod ကမင်းရှာနေတဲ့ပုံစံဘဲ ကမ္ဘာနှစ်ခုစလုံးတွင်အကောင်းဆုံးကိုရယူပါပိုမိုရိုးရှင်းသော user interface၊ PC ဗားရှင်းနှင့်တူသောကွဲပြားသော menu screen များ
၎င်း၏နာမည်ကိုကောင်းစွာဖော်ပြထားသကဲ့သို့၊ X-Ray အမြင် ကျွန်ုပ်တို့အားသိခွင့်ပြုသော X-ray အမြင်ကိုပေးသည် ရင်ဘတ်နေရာအတိအကျကိုမိုင်းများ၊ အခြားကစားသူများ ... သိသာထင်ရှားသည့်ဤ mod သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများအား trolling လုပ်ရန်ထောင်ချောက်ဆင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
Lucky Block ပါ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် lucky block generator ဖြစ်သည် ၎င်း၏အမည်ကိုလည်းဖော်ပြသည်။ Pig mobs များကို Nintendo Mario-style question mark block များဖြင့်အစားထိုးထားပြီးဝက်ရှိသမျှကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဤလုပ်ကွက်များတွင်တိရစ္ဆာန်များ၊ သီးသန့်အရင်းအမြစ်များကိုသင်တွေ့နိုင်သည် ပေါက်ကွဲသံတစ်ခုနဲ့တွေ့မယ်ခေါင်း ၃ လုံးပါတဲ့ဘီလူး ...
ရေခဲသေတ္တာ၊ မီးဖို၊ ရုပ်မြင်သံကြားကဲ့သို့သင်၏အိမ်သုံးပစ္စည်းများကိုအလှဆင်လိုလျှင်သင်ရှာနေသည့်ပုံစံဖြစ်သည် ခေတ်မီကိရိယာများ။ ငါတို့လည်းရှာတွေ့နိုင်တယ် တေးဂီတစက်များ၊ ရေအေးစက်များ၊ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၊ အဆင့်မြင့်ထိုင်ခုံများ၊ စားပွဲများနှင့်ကုတင်များ...
Minecraft PE အတွက် Mods များ
Minecraft Pocket Edition အတွက်အပြည့်စုံဆုံး mod များထဲမှတစ်ခုကို Minecraft PE အတွက် Mods အမည်အောက်ရှိ Play Store တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဒီ mods အစုံ၊ ဖြစ်နိုင်ချေ ၅ ခုတွင်ကြယ် ၄.၆ လုံးရှိသည် ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ပေါင်း ၂၈၀၀၀၀ ကျော်ကို download လုပ်ပြီးအခမဲ့ရယူနိုင်ပြီးနောက်၎င်းတွင်ကြော်ငြာများနှင့် app အတွင်း ၀ ယ်ယူမှုများပါ ၀ င်သည်။
ငါအရင်စာပိုဒ်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့သလို Minecraft PE အတွက် Mods ကaပါ mod အစုံ ရှင်သန်မှုနှင့်စွန့်စားမှု၊ ပရိဘောဂသင်ခန်းစာ၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၊ ကားများနှင့်လေယာဉ်များ၊ သံချပ်ကာနှင့်လက်နက်များ၊ ကိရိယာများ၊ တံခါးများ၊ GTA ...
ဒီ mods တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါတို့ယုံကြည်တဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲကိုငါတို့ပေါင်းနိုင်တယ် အစွမ်းထက်ဖုတ်ကောင်များ၊ ဧရာမပင့်ကူများ၊ ကွဲပြားသောပုံသဏ္armန်ထိုင်ခုံများ၊ သစ်သားစားပွဲများနှင့်ထိုင်ခုံများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်များ၊ ခွေးများ၊ ကြောင်များ၊ ဒိုင်နိုဆောများ၊ ရဟတ်ယာဉ်များ၊ လေယာဉ်ဟောင်းများ၊ တင့်ကားများ၊ ဒဏ္legendaryာရီဓားရှည်များ၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးအားလုံး၏ကိရိယာများ GTA 5
ရေးသားသူ: Minecraft အတွက်ကျွမ်းကျင်
Play Store မှာငါတို့ရထားတဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပလီကေးရှင်းကတော့ Mods - AddOns for Minecraft PE, ငါတို့လုပ်နိုင်တဲ့အပလီကေးရှင်း လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါကြော်ငြာများ၊ အက်ပ်အတွင်း ၀ ယ်ယူမှုများပါ ၀ င်သည်၊ သုံးသပ်ချက် ၃၀၀၀၀၀ ကျော်ရရှိပြီးဖြစ်နိုင်ချေ ၅ ခုတွင်ကြယ် ၄.၄ လုံးရှိသည်။
ယခင်တစ်ခုကဲ့သို့ဤအပလီကေးရှင်းသည် mods အစုတစ်ခုဖြစ်သည် Minecraft Pocket Edition ၏ version 0.16.0 လိုအပ်သည်မရ။ ဤအပလီကေးရှင်းကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသော mods များထဲတွင် Soartex Fanver, Ozocraft, Jolicraft, JohnSmith တို့ပါ ၀ င်သောအ ၀ တ်များ၊ အရေခွံများ၊ အစေ့များ၊ ပရိဘောဂများ၊ ယာဉ်များ၊ တိရစ္ဆာန်များ (ခြင်္သေ့၊ ဝက်ဝံ၊ ဒိုင်နိုဆော၊ ကျားများ) ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွန့်ပစ်ခြင်းတွင် ၁၀၀၀ ကျော်ရှိသည် Minecraft အတွက်အရေခွံ.
အကယ်၍ လျှောက်လွှာနှစ်ခုသည်ပြီးပြည့်စုံသည်ဟုထင်ပါက Minecraft PE အတွက် Block Master သည်ယခင်အရာများထက်ပိုဝေးသည်၊ ငါတို့အားလုံးအခမဲ့ရယူနိုင်သော application တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်အပလီကေးရှင်းအတွင်း၌ကြော်ငြာများနှင့် ၀ ယ်ယူမှုများပါ ၀ င်သည်။ ဒီ app တစ်ခုရှိတယ် သုံးသပ်ချက် ၆၅၀,၀၀၀ ကျော်ရရှိပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်ချေ ၅ ခုတွင်ကြယ် ၄.၆ ပွင့်.
Black Master ကိုငါတို့တွေ့နိုင်တယ် အရေခွံများ၊ အစေ့များ၊ အဆောက်အအုံများ၊ အ ၀ တ်များမှတဆင့်မြေပုံများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ…။ တောင်ကုန်းများ၊ အပင်များ၊ မြို့များ၊ ရဲများ၊ သူပုန်များ၊ parkour minigames များ၊ လက်နက်အားလုံး၊ သင်္ဘောများ၊ ရဟတ်ယာဉ်များ၊ အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်များ၊ ကားများ၊ ပရိဘောဂများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်တီးမှုများကိုအလှဆင်ရန်၊ ဖျောက်ထားသောသူရဲကောင်းများနှင့်အကျော်အမော်များအပါအ ၀ င်အရေခွံအမျိုးမျိုး၊ ကျော်ကြားသူများ။ စိတ်ထဲရှိသမျှကို Block Master တွင်တွေ့လိမ့်မည်။
Minecraft အတွက် Addons သည်တစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့လျှောက်လွှာ ၎င်းတွင်ကြော်ငြာများပါ ၀ င်သော ၀ ယ်ယူမှုအမျိုးအစား ၂၀၀၀၀၀ ကျော်ရရှိပြီးဖြစ်နိုင်ချေ ၅.၅ တွင်ကြယ် ၄ ပွင့်ပါ ၀ င်သောအက်ပ် ၀ ယ်ယူမှုအမျိုးအစားမရှိပါ။
ဤအပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို mods များစွာကိုပေးသည် ငါတို့ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပါ အဲဒါကိုငါတို့လိုချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးငါတို့ကမ္ဘာကြီးကိုပိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်အောင်လုပ်တယ်။ အပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတည်ဆောက်မှုများ၊ ဂိမ်းများ၊ ဇာတ်ကောင်များအတွက်အရေခွံများအပြင်ကျပန်းလုပ်ကွက်များနှင့်ကံကောင်းစေသောဘောလုံးများကိုဖွင့်ပေးသည်။
Minecraft PE အတွက်ပရိဘောဂ mods များ
Minecraft PE အတွက်ပရိဘောဂပုံစံများကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာကောက်ယူနိုင်သည် ပရိဘောဂများကိုစွဲမက်ဖွယ်အလှဆင်မှုများဖန်တီးရန် ငါတို့ရဲ့အိမ်တွင်းရောအပြင်မှာပါ ဒီ mod ကြောင့်ငါတို့ကပရိဘောဂအပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားတဲ့မီးဖိုချောင်တွေ၊ ပရိဘောဂမျိုးစုံ၊ အိပ်ခန်းတွေ၊ ငါတို့ရဲ့ဥယျာဉ်ကိုအလှဆင်နိုင်တယ်။
ဒီ mod ကိုသင့်အတွက်ရနိုင်သည် လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါကြော်ငြာများပါ ၀ င်သော်လည်းအက်ပ်အတွင်း ၀ ယ်ယူခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်အကဲဖြတ် ၁၀၀၀၀၀ ကျော်ရရှိပြီးဖြစ်နိုင်ချေ ၅ ခုတွင် ၄.၄ ดาวရှိသည်။
ပရိဘောဂပုံစံ Minecraft PE အတွက်ပရိဘောဂပုံစံများ
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သင့်အားပြထားသည် Minecraft အတွက်အကောင်းဆုံး mods များပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သော mods များ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကလမ်းမှာတစ်ခုခုလွဲချော်ခဲ့ရင် (သို့) သီးခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် mod တစ်ခုကိုရှာနေတယ်ဆိုရင် Play Store မှာသေချာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Play Store တွင် Minecraft အတွက် mods အမျိုးမျိုးကို mods များတွင်တွေ့နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့အများစုသည်လှည့်စားနိုင်သောအက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်နိုင်သည် ဗိုင်းရပ်စ်များ (သို့) Trojan များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာထဲသို့ခိုးဝင်သည်။ သူတို့တကယ်အလုပ်ဖြစ်တာသေချာဖို့ငါတို့ကမှတ်ချက်များအရေအတွက်၊ မှတ်ချက်များနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရမယ်။
mod တစ်ခုရှိလျှင် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အလွန်နိမ့်သည်ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးအရာသည်မှတ်ချက်များကိုရယူသည့်အခါ "အလုပ်မလုပ်ဘူး"၊ "ဘာမှမလုပ်ဘူး"၊ "browser ဖွင့်သည်"၊ ကြော်ငြာကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်မထွက်နိုင်ဘဲတွေ့နိုင်သည်။ “ ဟာ…၊
ဤအများမှာ မထင်ရှားသောလက္ခဏာများ ထိုအပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာအတွက်ခိုင်လုံသောအကြောင်းအရာအမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်တို့အားမပေးပါ၊ ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများကိုကူးစက်စေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စုံစမ်းနှောင့်ယှက်မှုထဲသို့ကျသွားပြီး၎င်းကို download လုပ်ပါက၎င်းသည်မည်သည့်ခွင့်ပြုချက်အမျိုးအစားကိုတောင်းခံသည်၊ အဘယ်ကြောင့်စစ်ဆေးရမည်ကိုစစ်ဆေးရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Minecraft Pocket Edition အတွက်ထိပ်တန်း mods ၁၀ ခု
iiiF150 R2022: ဘက်ထရီ ၈,၃၀၀ mAh ပါ ၀ င်သောအကြမ်းခံစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့်စျေးနှုန်းကျဆင်းသွားသည်